Ma jiro qof u muuqda inuu ogaado haddii Dayax-gacmeedka Hindiya Moon uu ka badbaaday dhulkiisa khasabka ah - BGR - WAA KU SAMEE
ACCUEIL » SAYNISKA Ma jiro qof u muuqda inuu ogaado haddii Dayax-gacmeedka Hindi Moon uu ka badbaaday degitaankiisa khasabka ah - BGR
Wax walba waxay u muuqdeen inay sifiican ugu socdaan wakaaladda hawada Hindiya usbuucii hore madaama xamaasada ay ku korortay soo caga dhigashada dayax gacmeedka Chandrayaan-2. Sanado iyo sanado badan oo qorshe ah ayaa India meeleeyay meel ku habboon oo ay ku dalbadaan meel liiska liisaska waddammada u oggolaanaya inay degto jilicsan dayaxa, laakiin waxaas oo dhan waa ay is beddeleen wax yar ka hor inta aan la gaarin diyaaradda. dalka.
aamusay dhowr daqiiqadood ka hor intaanu u malayn inuu taabto Dayaxa, isagoo uga tagaya hawl wadeenadiisa Earth si ay isaga u daryeelaan. Hadda, dayax gacmeedka Hindiya wuxuu arkay milkiilaha dhulka korkiisa ka burburay, waxaa jira arrin walwal gelinaya qof walba: ma nool yahay?
Qaar ka mid ah warbixinadii hore Waxay soo jeedisay in diyaaradda noocaas ah ay weli jirto inkasta oo ay burburtay, sida laga soo xigtay ilo aan la magacaabin oo sheegaya in qalabka caga-dhiggu uu ku dhow yahay meelihiisa la qorsheeyay laakiin in loo jiiday dhinaca halkii la taagnaa.
ISRO - oo ah ururka cilmi baarista cirka ee Hindiya, oo aasaasi u ah Indian NASA - ayaa sheegay Isniinta inay wali isku dayeyso inay xiriir la sameyso milkiilaha guriga ka dib markii lagu arkay dusha sare. Ma jiraan wax cusboonaysiin ah oo dheeri ah oo ilaa iyo hadda soo jiray, taas oo aan calaamad weyn u ahayn.
Haddii taasi u muuqato adiga oo adiga ku gartay, waxay u badan tahay inay taasi tahay tii ku dhacday milkiilaha reer Israel Beresheet markii uu isku dayey inuu dego Abriil. Diyaaradda ayaa dhacday meel waxyar ka hor intaadan soo degin, halkii ay si tartiib tartiib ah ugu degtay, waxay ku burburtay dusha dayaxa. Gaariga ayaa ahaa gebi ahaanba khasaare.
Arinka Chandrayaan-2, itimaalka in cirku uu wali xitaa qayb ahaan shaqeynayo waa mid dheer. Xitaa haddii ISRO ay ku taallo aagga uu taabtay LG, kuma filna in la go'aamiyo heerka waxyeelada LG, iyo xaqiiqda ah inay aamusnaato ayaa muujineysa inay u badan tahay inuu ku dhacay tirinta .